Xildhibaan Fiqi: Yaa noo fasira cadaaladda AMISOM la marsiiyey ee NISA kari weysay? | Dayniile.com
Home Warkii Xildhibaan Fiqi: Yaa noo fasira cadaaladda AMISOM la marsiiyey ee NISA kari...
Xildhibaan Fiqi: Yaa noo fasira cadaaladda AMISOM la marsiiyey ee NISA kari weysay?
Wasiirkii hore ee amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo war ka soo saaray xukunka dilka iyo xabsiga isugu jira ee lagu riday askarta AMISOM ee dishay dadkii shacabka ahaa ee lagu laayey deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeellada Hoose, ayaa su’aal ka keenay cadaaladda la marsiiyey AMISOM ee la marsiin waayey saraakiisha NISA ee lagu tuhmaayo kiiska Ikraan Tahliil Faarax.
Previous article20 ka mid ah maleeshiyaadka Xuutiyiinta oo lagu dilay koonfurta Ma’rib
Next articleWafdi ka socday Wasaaradda Qorsheynta Qaranka oo lagu soo dhaweeyay Kismaayo
Qoraaga u dhashay dalka Koonfur Afrika Damon Galgut ayaa ku guulaystay abaal-marinta qaaliga ah ee Booker Prize ee shekooyiinka khiyaaliga. Waxaa uu guushan ku muteystay...